Manje usungathenga iMac mini M1 ngenketho ye-10 GB Ethernet | Ngivela kwa-mac
Manje usungathenga iMac mini M1 ngenketho engu-10 GB Ethernet
NgoLwesibili ntambama, konke ukukhanya bekukusha iMac M1, the iPad Pro, nabalindelwe isikhathi eside I-AirTags. Ekupheleni kombhalo osemqoka, i-Apple Web Store ibisebenza futhi, namadivayisi amasha abuyekeziwe.
Kepha bekukhona omunye wabo naye obhekane nokuvuselelwa izolo, kepha wangabonakala ngokuphelele: The Mac mini. Kusukela manje, ama-Apple Silicon Mac minis ayatholakala ngenketho yenethiwekhi esheshayo ye-10GB Ethernet, eshesha kakhulu kune-1GB Ethernet ejwayelekile.
I-Apple isebenzise "ukumiswa" kwesitolo sayo esiku-inthanethi ngoLwesibili ngenxa yesethulo esithi "Intwasahlobo ilayishiwe" futhi "ishelele" isibuyekezo esisha sedivayisi ngaphandle kokubanga umsindo. Kusukela manje, iMac mini M1 inembobo ye-Ethernet engakhethwa I-10 Gigabit, ebikade itholakala kuphela kunguqulo ye-Intel yeMac efanayo.
Ngoku-oda iMac mini M1 esitolo se-Apple online, abasebenzisi manje sebengakhetha iMac nge-10 Gigabit Ethernet port, ngokushesha ukwedlula imbobo yendabuko yeGigabit Ethernet. Kusukela ngoLwesibili le nketho itholakala okokuqala ngamamodeli Mac mini ngomprosesa we-M1.
Inketho inyusa intengo yeMac mini ngo I-115 Euros ukwengeza entengo yedivayisi, eqala kuma-Euro angama-799 kunguqulo yayo eyisisekelo. Lokhu kulungiselelwa kungaba nge-Mac mini M1, ene-8 GB ye-RAM, i-256 GB ye-SSD, nenethiwekhi ye-1 GB Ethernet.
Uma sifuna ukucushwa okubiza kakhulu kutholakala kwi-Mac mini, kungakhuphukela kuma-2.064 Euro, neMac mini M1 ene-16 GB ye-RAM, 2 TB ye-SSD, ne-10 GB Ethernet.
Izinhlobo ezintsha ezine-Ethernet esheshayo seziyatholakala uku-oda, ngokulethwa okulinganiselwa eSpain kwe- isonto lokuqala lika-May.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Mac Mini » Manje usungathenga iMac mini M1 ngenketho engu-10 GB Ethernet
I-Apple Pay izofika kwa-Israyeli ngoMeyi
I-Apple Maps izokwengeza ukuhlela kabusha emabalazweni aseSpain nasePortugal